२ करोड १५ लाख ग्राहकमा पुग्यो ब्रोडब्याण्ड सेवा, फोरजीमा एनसेल अगाडी - Aarthiknews
काठमाडौं । २ करोड १५ लाख ७६ हजारमा जनसंख्यामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुगेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको एमआईएस प्रतिवेदनमा मुलुकमा कुल जनसंख्यामध्ये ७२.२२ प्रतिशत जनसंख्यामा ब्रोडब्याण्ड सेवा पुगेको हो । चैतसम्म नेपाल टेलिकमले १ करोड ६ लाख ९४ हजार ग्राहकमा सेवा पुर्याएको छ भने एनसेलले करिब ६४ लाख ४९ हजार हजारमा ब्रोडब्याण्ड सेवा उपलब्ध गराएको छ ।
४२ लाख ४८ हजार जनसंख्यामा स्मार्ट टेलिकम सेवा विस्तार भएको छ भने एनटीपीएलको सेवा अत्यन्त न्यून रहेको छ । चैतसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने मोबाइल ब्रोडब्याण्डकर्ता ७५ प्रतिशत, तारसहितको फिक्स ब्रोडब्याण्ड प्रयोगकर्ता २४ प्रतिशत र वायरलेस फिक्स ब्रोड ब्याण्डमा एक प्रतिशत रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
बजारमा दूर सञ्चारको हिस्सा कसको कति ?
दूर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूमध्य सबैभन्दा बढी हिस्सा नेपाल टेलिकमको रहेको छ । नेपाल टेलिकमले ५२.३२ प्रतिशत बजार हिस्सा लिएको छ भने अर्को निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको हिस्सा ४२.१६ प्रतिशत रहेको छ । स्मार्ट टेलिकमको हिस्सा ५.५ र अन्यको थोरैमामात्र सेवा प्रदान गरिरहेका छन् ।
कहाँ कहाँ पुग्यो फोरजी सेवा ?
चैतसम्म फोरजी सेवा प्रयोग कर्ता ४५ लाख १६ हजार पुगेको छ । फोरजी सेवा प्रदायक कम्पनीअनुसार हेर्दा सबैभन्दा बढी फोरजी सेवा एनसेल रहेको छ । एनसेलले ३४ लाख ८८ हजारमा फोरजी सेवा पुर्याएको छ भने नेपाल टेलिकमले आठ लाख ४३ हजार ग्राहकमा सेवा पुगेको टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशीले बताए । । चैतसम्म १ करोड १५ लाख २३ हजार ८ सय ८८ ग्राहकमा थ्रीजी सेवा पुगेको प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
२०७५ माघसम्म एनसेलको फोरजी ग्राहक १६ लाख ७२ हजार ८९१ थियो । २०७६ माघमा एनसेलको ग्राहक संख्या ११२ प्रतिशतले बढेर ३५ लाख ४५ हजार २८६ पुगेको छ । २०७५ माघसम्म स्मार्टको फोरजी ग्राहक एक लाख १९ हजार ६८० को संख्यामा थियो । २०७६ माघमा स्मार्टको ग्राहक संख्या १३१.३१ प्रतिशतले बढेर दुई लाख ७६ हजार ८३२ पुगेको छ ।
२०७५ माघसम्म सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको फोरजी ग्राहक ७ लाख ११ हजार १५७ को संख्यामा थियो । २०७६ माघमा नेपाल टेलिकमको ग्राहक संख्या १८.४७ प्रतिशतले बढेर ८ लाख ४३ हजारमा पुगेको छ ।
दूरसञ्चार सेवाप्रदायकमध्ये नेपाल टेलिकमले २०७३ पुस १७ गते काठमाडौं उपत्यका र पोखरामा फोरजी विस्तार गरेको थियो । एनसेलले २०७४ जेठबाट काठमाडौं उपत्यकालगायत नगरकोट, बनेपा तथा धुलिखेलमा सेवा सुरु गरेको थियो । स्मार्ट सेलले २०७४ कात्तिकबाट काठमाडौं र पोखराबाट सेवा सुरु गरेको हो ।
२०७५ असोज ५९ वटा साना तथा ठूला सहरमा टेलिकमले फोरजी सेवा सुरु गरेको हो । २०७५ माघदेखि टेलिकमले ७७ जिल्लामा फोरजी सेवा विस्तार गरिसकेको छ । ७७ जिल्ला फोरजी सेवा विस्तार गर्न नेपाल टेलिकमले १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अहिले टेलिकमको सेवा ७७ जिल्लामै पुगेको छ । उनका अनुसार वैशाख महिनामा टेलिकमको फोरजी ग्राहक ५७ लाख नागिसकेको टेलिकमले जानकारी दिएको छ ।